Review – Investing.com – Af Soomali | Baydhabo Online
Review – Investing.com – Af Soomali
Maanta waxaan eegaynaa sida loo isticmaalo website-ka www.investing.com. Waa website muhiim aad iyo aad ah, oo information badan laga helo iyo live charts. Si aad uga faa iideysato websiteka waa in aad barataa sida loo isticmaalo. Markastana waa muhiim in aad leedahay charting staion oo aad kala socon kartid qiimaha iyo is badalka shayga aad rabtid in aad gadatid misa iska gedid. Website-kan waxaad ka heli karta qiimaha lacagta sarifka is badasha side US dollar, Euro iwl. Waxaad kaloo ka heli kartaa qiimaha Macdanta sida Saliida shidaalka, Dahabka, Silferka, Sonkorta, qamadiga iwl.
Maanta waxaa lagu faa iidaa lasocitaanka akhbaarta aduunka, markaa hadii aad heysatid war misa akhbaar hada soo baxday waxaad noqon kartaa dadka ugu horeeya safka oo shaygii gata misa iska gada taasoo kuu kordhinaysa faa iidadaada.
Website-kan waa kii ugu horeeyey oo aan soo bandhigo sida loo isticmaalo, kuwa kalana waan soo wadaa. Wixii fikrad ah misa hadii aad suaalooyin qabtiin soo bandhiga, waxaana isku dayeeynaa in aanu kala faa iideysano in sha Allah. Mahadsanidiin
Like Share Comment Review